Gurmadka Barafka (Snow Emergency) oo Minneapolis iyo St Paul looga dhawaaqay -
Magaalooyinka Minneapolis iyo St Paul ayaa maanta ku dhawaaqay gurmadka barafka looga xaaqo wadooyinka. Caawa oo ay bisha January ay tahay 22, 2018 ayaa la bilaabayaa in barafka laga xaaqo dhamaan wadooyinka labadan magaalo.
Magaalada Minneapolis waxaa la bilaabayaa in barafka la xaaqo saacadu marka ay tahay 9:00 habeenimo, waxayna soconaysaa ilaa iyo 8:00 subaxnimo.
Sidoo kale magaalada St. Paul waxaa iyaddana gurmadka barafka looga xaaqayo wadooyinka la bilaabayaa saacadu marka ay tahay 9:00 habeenimo, baraf xaaqitaanka St. Paul ayaa soconaya ilaa iyo 8:00 subaxnimo.
Haddaba haddii baabuurka banaanka aad dhigan jirtay hel meel aad baabuurka dhigato mudada gurmadka ah ee barafka looga xaaqayo wadooyinka si aanan gaariga lagaaga jiidin, laguuna ganaaxin.
Waxaad faahfaahin dheeraad ah ka heli kartaa bogga internet-ka ee ay leeyihiin Magaalada Minneapolis iyo St. Paul. Waxaad kale oo aad wici kartaa taleefanka lagala socdo arrimaha la xiriira gurmadka barafka ee degdega ah (Minneapolis 612- 348-SNOW (7669). TTY: (612) 673-2157 ( (651) 266-PLOW).
Daawo video-gan si aad u fahanto gurmadka barafka looga xaaqayo wadooyinka iyo waxa lagaa rabo in aad sameyso.
Xigashada sawirka: City Page
Related Items:Featured, Saint Paul, Somali community, Somali Minneapolis
The Minnesota Humanities Center and Somali Community Partners to Produce Somali Youth Anthology
Cabdirisaaq Janogale oo ku dhawaaqay in uu yahay Musharax u Taagan qabashada xilka Madaxtinimada ee Puntland